Soomaaliya, 01 August 2018
Arbaco 1 August 2018
Jabuuti oo dhalleeceysay baaqii Farmaajo
Dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday baaqii dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ee ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo Djibouti colaad aan weli xal laga gaarin kala dhaxeyso.
Xoghayaha difaaca Britain oo tagey Muqdisho
Xoghayaha difaaca ee dalka Britain Gavin Williamson ayaa maanta booqasho ku tagay magaaladda Muqdisho, halkaasi oo kula kulmay madaxweeynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 431-aad
Dhageyso Galka Baarista: Somalia iyo is-dhexgalka dhaqaale ee Geeska
Waxaa bilihii ugu dambeeyey ay hoggaamiyayaasha Geeska Afrika ka hadlayeen inay samaystaan is-dhexgal dhaqaale. Hindisahan waxaa dardargeliyey hoggaamiyaha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed.
QM iyo IGAD oo dhex dhexaadinaya Somaliland iyo Puntland
Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa Hargeysa ku sugnaa wefti ka socda Qaramada Midoobay iyo urur goboleedka IGAD, kuwaas oo wadahadallo iyo kulamo la lahaa mas’uuliyiinta Somaliland, xisbiyada siyaasadda iyo ururrada rayidka ah.
QM oo dhageysatay warbixinta Somalia iyo Eritrea
Fallanqeyn: Muhiimadda safarkii Farmaajo ee Eritrea
Waddamada Somaaliya iyo Eritrea ayaa ku heshiiyey inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasilloonida Gobolka, iyo arrimo kale.
Soomaaliya iyo Eritrea oo heshiisyo kala saxiixday
Taariikhda goolhayihii Somalia ee geeriyooday
Somaliland: Xeerka kufsiga oo la ansixiyey
Qubanaha Maanta, July 29, 2018.
ONLF: Farmaajo Raali Gelin ayuu ka Bixiyay Dhiibistii Qalbidhagax
Wareysi gaar ah oo Idaacadda VOA ay la yeelatay Guddoomiyaha Ururka ONLF, Admiral Maxamed Cumar Cusmaan ayuu ku sheegay in dawladda Somalia ay raali-galin ka bixisay dhiibistii Qalb-dhagax iyo in Ururka ONLF uu yahay urur argagixiso